Home Subgenres mahatsiravina Spoiler Free Review: 'Mikiakiaka' (2022)
Spoiler Free Review: 'Mikiakiaka' (2022)
Ny Ghostface dia mampiala voly toy ny antsy amin'ny horohoro ho an'ny taona 2020!
by Jacob Davison Janoary 12, 2022
by Jacob Davison Janoary 12, 2022 1,885 hevitra
Eo anelanelan'ny remakes, reboots, requels, sy ny sisa amin'ny karazana franchise rehetra eto ambanin'ny masoandro toy ny Halloween, HITAN'I, ary na dia Star Wars, ilay andian-teny tonga ao an-tsaina dia hoe “vaovao indray ny zavatra taloha rehetra”. Ny sarimihetsika, ary indrindra ny fampihorohoroana, dia manana fihantsiana lehibe ho an'ny nostalgia sy ny tahotra mahazatra antsika. Noho izany dia misy tsy tambo isaina Zanaky ny katsaka sarimihetsika. Noho izany dia tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo sarimihetsika mampihoron-koditra lehibe indrindra miaraka amin'ny iray amin'ireo kisary lehibe indrindra sy fanta-daza indrindra amin'ny slashers dia miverina amin'ny dimy amby roapolo taona mahery mba hanakanana ny mpihaino indray ary hanapaka ny fironana mampihoron-koditra ankehitriny. Izay mitondra antsika ho niantsoantso (2022)! Ity famerenana ity dia tsy misy spoiler, noho izany dia hiezaka aho ary handinika fa tsy hamoaka antsipiriany mahafaty be loatra…
Ghostface sy Jenna Ortega ao amin'ny Paramount Pictures sy ny “Scream” an'ny Spyglass Media Group.
Woodsboro, Kalifornia. Iza no afaka maka sary an-tsaina ny tanàna kely iray mangina iray izay noheverina ho aotra noho ny andian-dahalo sy famonoana izay nanozongozona ny firenena sy ny kolontsaina malaza (na eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika na amin'ny tena fiainana) nandritra ny am-polony taona maro ho avy. Ary toy ny ravina mivolontsôkôlà sy mihintsana, ny vorona manidina mianatsimo mandritra ny ririnina, na ny volana mihodina feno, dia misy tsingerina hafa mitranga. Ghostface hafa indray no niseho ary mitondra fandatsahan-drà hafa indray - "horohoro avo lenta" ho voaozona! Ity fampihorohoroana ity dia mitondra ny tanora Sam Carpenter (Melissa Barrera, Any amin'ny havoana) avy any Modesto ka hatrany Woodsboro mba hiadiana amin'ireo matoatoa tamin'ny lasa mba hiadiana amin'ilay manenjika azy amin'izao fotoana izao, ny tanàna, ary ireo endrika mahazatra amin'ny tantaran'ny manindrona...
Raha jerena ny zava-misy, vaovao niantsoantso ho fanamby sarotra ho an'ny mpamokatra sarimihetsika rehetra. Indrindra fa tsy maintsy manaraka sy mameno ny kiraron'i Wes Craven lehibe sy ny asa soratr'i Kevin Williamson. Fa faly aho mitatitra fa ny Radio Silence, ekipa ao ambadiky ny sarimihetsika mampihoron-koditra toy ny Southbound ary Vonona na tsy nanaporofo ny tenany mihoatra noho ny fahaizany mandray ny fahefana, indrindra ho an'ny mpihaino vaovao sy folo taona. Ny teny fototra mazava ho azy dia ny hoe "Requel" fironana izay tokony ho fantatry ny mpankafy franchise manokana. Fitohizana mivantana amin'ny tany am-boalohany, mazàna miala amin'ireo tohiny hafahafa kokoa na mikorontan-tsaina sady manome antsika andiana vaovao mety ho niharam-boina sy/na voarohirohy rehefa mamerina ireo toetra lova mahazatra hitari-dalana ny sambo.
Lr, Dylan Minnette (“Wes”), Jack Quaid (“Richie”), Melissa Barrera (“Sam”) ary David Arquette (“Dewey Riley”) dia kintan'ny Paramount Pictures sy ny “Scream” an'ny Vondrona Media Spyglass.
Tamin'ny voalohany dia momba ny sarimihetsika slasher sy tropes, avy eo ny tohiny, avy eo ny rafitra Hollywood, avy eo reboots, ka fanitarana lojika fotsiny. Ary miasa izany. Nilaza ny mpilalao vaovao mety ho niharam-boina sy/na voarohirohy ho voaroaka tsara ihany koa. Ny Sam an'i Melissa Barerra dia manao protagonista manaitra indrindra indrindra fa ny fanambarana momba azy dia manampy sosona amin'ny misterin'ity Ghostface vaovao ity. Na dia nisongadina manokana ho ahy aza dia i Jasmin Savoy Brown ho Mindy Meeks-Martin, zanak'anabavin'ny tany am-boalohany. niantsoantso mpilalao meta Randy Meeks (Enga anie izy handry fahizay. Nahazo trano fijerena sarimihetsika fahatsiarovana ho fanomezam-boninahitra azy tao amin'ny tranon'ny Meeks aza izy.) izay mametraka ny tenany haingana sy amin'ny fomba fohy ho toy ny manam-pahaizana meta horohoro vaovao.
Feno fitsipika vaovao mandritra ny folo taona vaovao ary fifantohana amin'ny fampihorohoroana avo lenta vs manindrona fomba fametahana sy bashing. Raha ny momba ny toetran'ny lovan-tsofina, dia tsy ny trinité masin'ny franchise ihany no azontsika amin'ny fiverenan'i David Arquette, Courtney Cox, ary Neve Campbell ho Dewey Riley, Gale Weathers ary Sydney Prescott fa Marley Shelton ho Judy Hicks avy amin'ny Mikiakiaka 4. Izany dia miteraka fampitahana sy fifanoherana mahaliana izay tsy ho tsapa loatra amin'ireo mpankafy horohoro tranainy miaraka amin'ireo mpankafy tahotra manaraka. I Dewey manokana dia manao vazivazy momba ny taonany sy ny impiry izy no voatsatoka antsy namerimberina izany ary ny fahaleony.
Neve Campbell (“Sidney Prescott”) kintana ao amin'ny Paramount Pictures sy ny “Scream” an'ny Vondrona Media Spyglass.
Raha ny momba ny Ghostface, dia ilay kitapo taloha sy saron-tava miaraka amin'ny kojakoja vaovao feno ho an'ny taona vaovao. Mampihomehy ny mijery ny lasa fa ny Ghostface tsirairay teo aloha dia tsy maintsy mahay teknolojia mba hampiasana ny fomba ananany, ary ity vaovao ity dia tsy misy hafa. Miaraka amin'ny gadget teknolojia avo lenta sy ny fahaizana mampiasa azy ireo miaraka, ity psycho ity dia afaka mitondra anao amin'ny telefaoninao sy ny findainao. Mikorontana amin'ny GPS-nao. Ary na dia hack aza ny rafitra fiarovana an-tranonao. Manampy sosona horohoro ara-teknolojia an-tampon'ny tahotra fototra indrindra: ny sasany hafahafa amin'ny akanjon'ny Halloween izay mandatsa-dra anao amin'ny antsy fihazana. Ary amin'ny resaka tahotra dia misy seho sy filaharana miaraka amin'ny fananganana sy fandoavana tsara. Ny zavatra iray manokana dia nandeha ela be ka tsy afa-nanao afa-tsy ny hihomehy aho satria tsy nitsahatra nanorina sy nanorina lavidavitra kokoa ny nantenaina. Manasongadina fa na dia niova aza ny fotoana, niantsoantso dia mbola mampihomehy toy ny mety ho mampatahotra sy meta.
Ghostface ao amin'ny Paramount Pictures sy ny “Scream” an'ny Spyglass Media Group.
Ao amin'ny fotony, niantsoantso (2022) dia… a niantsoantso sarimihetsika. mamely ny kapoka mahazatra rehetra nefa tsy mamerina ny tany taloha. Sarotra loatra, izany hoe. Mitsidika ara-bakiteny ireo toerana mahazatra manodidina an'i Woodsboro izy io, saingy andian-dahatsoratra mahafinaritra sy mifandimby ilay tetika. Na dia miavaka aza ny fifantohan'izy ireo ary mety ho nahaliana ny hahita bebe kokoa ny fiantraikan'ny famonoan'olona Ghostface hafa miely patrana. Azo antoka fa manompo amin'ny ambaratonga sy ny sehatra ho toy ny bokotra na sary fitaratra amin'ny tany am-boalohany sy ny halaviran'izany sy ny horohoro tao anatin'ny 25 taona. Amin'ny maha-deconstructs slashers sy ny tropes manodidina azy, dia manome fiainana vaovao sy voninahitra ho azy ireo miaraka. Esorina ary atambatra indray mba hamoronana zava-baovao. Iza no mahalala? Ity dia mety ho pitik'afo mamelona indray ireo slashers ho an'ny efijery lehibe na farafaharatsiny mamiratra jiro avy amin'ny horohoro avo lenta mankany amin'ny horohoro fotsiny. Farafaharatsiny, tokony ho afaka hanaiky isika rehetra fa tsara kokoa noho izany Mikiakiaka 3. Ary vonona ny hiverina foana i Ghostface rehefa mihodina ny rivotra sy ny fironana mampihoron-koditra…
niantsoantso Hivoaka amin'ny teatra ny 14 janoary 2022.
4.5 amin'ny 5 maso.
Jereo ny Cateories Select Category4K UHD (19)Amazon (sarimihetsika) (11)Amazon (andiany) (12)AppleTV + (6)Blu Rays (40)Box Office (1)Horohoro amin'ny hatsikana (51)Tantara an-tsary (16)Zavatra tsara hividianana (57)Cool Stuff tokony hatao (9)Krismasy mampatahotra (2)Disney+ (série) (1)Editorial (1)Vaovao momba ny fialamboly (18)Facebook (andiany) (1)Angano (49)Rakitra hita (28)Mampihomehy (1)Lalao (220)Gore (26)Halloween (3)Haunts (6)HBO (andiany) (9)Boky mahatsiravina (69)Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (11,378)Horror Series (159)Subgenres mahatsiravina (18)Hulu (andiany) (7)Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (49)Resadresaka nifanaovana (andiany) (6)Horohoro LGBTQ (43)Lisitry (sarimihetsika) (46)Lisitry (andiany) (2)Tsena (22)Monster Horror (11)Sarimihetsika (3)Hevitra momba ny sarimihetsika (92)Sarimihetsika (527)Mozika (44)Netflix (sarimihetsika) (39)Netflix (andiany) (64)Tsy angano (5)Paranormal (78)Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (55)Sci-Fi (2)Andiany (1)Famerenana andian-dahatsoratra (10)Sarimihetsika fohy (2)Fotoana fampisehoana (andian-dahatsoratra) (1)Shudder (sarimihetsika) (61)Shudder (andiany) (20)Slasher (6)Hafahafa sy tsy mahazatra (42)Streaming Series (51)Streaming Series (2)Kilalao (8)Tranofiara (3)Trailer (lalao) (1)Tranofiara (sarimihetsika) (389)Tranofiara (andiany) (51)Heloka tena izy (51)TV (8)VOD (1)VR (1)YouTube (2)YouTube (sarimihetsika) (5)YouTube (andiany) (13)Zombies (1)
Resadresaka: Talen'ny 'The Last Thing Mary Saw' tao amin'ny...
Ny 'Pinocchio' an'i Guillermo Del Toro dia nahazo Trailer mahagaga voalohany...
Siny sy kaopy Popcorn 'Scream', amidy an-jatony...